Ogaden News Agency (ONA) – Bayaan – Itobiya oo ka afduubtay Nairobi Xubno Sare oo ka mid ah JWXO
Bayaan – Itobiya oo ka afduubtay Nairobi Xubno Sare oo ka mid ah JWXO
Posted by ONA Admin	/ January 27, 2014
Janaayo 27, 2014
Sirdoonka cadawga ayaa ka afduubay magaalada Nairobi Naftii-hure Sulub Axmad iyo Naftii-hure Cali Xuseen oo ka mid ahaa madaxda sare ee JWXO. Madaxdan oo ka mid ahaa guddiga Wadahadalka JWXO ayaa Nairobi u joogay diyaarinta Wareega 3xaad ee wadahadalka labada dhan ee JWXO iyo Itobiya.
Mana aha markii ugu horeysay ee Itobiya ay fal ka baxsan akhlaaqda dawliga ah iyo dhaqanka suuban ee dawladaha lagu yaqaano ay kula dhaqanto ergo wadahadal ay dalbatay. Waxay ahayd 1998kii markay ciidanka Itobiya ee nacabka ah dileen saddex ka mid ahaa ergadadii ay kuwada hadlayeen gudaha Ogadenya oo ku soo socda xarunta JWXO wadahadalka ka dib. Laba sano ka horna waxay Itobiya ku dishay Nairobi gudaheeda sargaal sare oo ka tirsan JWXO.
Falkan bahalnimada ah wuxuu dhabarjab ku yahay kalsoonidii wadahadalka Itobiya iyo JWXO wuxuuna dhaawacay inuu sii socdo wadahadalkaa. Falkan fulaynimada ah wuxuu ku sii dhiirigalinayaa halgankii shacabka Somalida Ogadenya ay kaga xoroobayeen gumaysiga Itobiya.
Arimahan waxay ka mid yihiin dhaqanka maamulka hadda ka jira Itobiya oo intay afduubaan xubno kamid ah JWXO ku andacooda inay yihiin xubno JWXO ah oo ka falaagoobay ururka oo isa soo dhiibay oo ogolaaday in hubka laga dhigo.
Waxaan ugu baaqaynaa Xukuumadda Kenya oo gogosha fidisay say ugu fududayso labada dhan inay meel dhex-dhexaad ah kuwada hadlaan, inay arintan si dhab ah u baadhaan kana codsadaan maamulka Itobiya inay soo celiyaan ergada ay afduubeen.
Wuxuu ururka JWXO ka codsanayaa bulshada caalamka inay cambaareeyaan falkan Itobiya ay ku dhaqaaqaday ogaadaana inay Itobiya kasoo horjeedo nabadda.